Archive du 20200327
Coronavirus 23 no voa, 1 nanao krizy mafy
88 no notiliana, nahitana olona 4 voaporofo fa mitondra ny tsimokaretina. 23 izany no voa hatramin’ny omaly, raha ny tatitry ny mpitondra tenin’ny CCO Covid 19 Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Savorovoro tany Toamasina Saika raikitra ny fandrobana, 3 voasambotra
Mafampana ny toe-draharaha ao Toamasina amin’izao fotoana izao. Ho an’ny omaly dia nisy ny fitokonana nataon’ireo mpitarika posy tao Morarano
Ampitatafika Nisy razana efa simba natsingevan` ny rano omaly
Nihorohoro tanteraka ny olona nahita, omaly. Razana iray no hita teny amin` ny reniranon` Sisaony tetsy Ampitatafika, tokony tamin` ny 3 ora tolakandro. Lehilahy iray,
Fiatrehana ny Coronavirus Naangona 10 tapitrisa ar mahery ireo Malagasy any Chine
Raha isika teto Madagasikara no nitaintaina fatratra tamin’ireo Malagasy mpiray tanindrazana monina any Chine iray volana lasa izay, dia mitsimbadika tanteraka ny rasa amin’izao fotoana izao.
Fampielezana tsaho Raikitra ny hazalambo sy fisamborana
Tsy misy zavatra amboamboarina manoloana ny filazan’ny sasany fa tsy marina ny antontan’isa avoakan’ny fanjakana, hoy ny valin-kafatr’i Lalatiana
Fihibohana andro fahaefatra Maro ireo nifamezivezy, nitohana ny fifamoivoizana
Nahomby ny paikady napetraka hatreto nifehezana an’ity valanaretina ity, hoy ny filoha Andry Rajoelina, ny alarobia alina raha namintina ny fivoaran’ity
Ady amin’ny Coronavirus Nisafidy ny hitoka-monina ny nosy sasany
Efa maneran-tany ity tahotry ny aretina “coronavirus”ity ka samy naka fepetra mifanandrify amin` izany ireo firenena sasany.
Fihibohan’ny olombelona Manadio ny tontolo iainana
Tao anatin` izay dimy andro nihibohana izay dia maro no nahatsikaritra fa niova ny rivotra iainana eto an-drenivohitra.